အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: နိစ္စဓူဝ မနက်ဖြန်...!
Posted by Pyiet Oo Aung at 4:11 AM
Great Ideas, Wonderful Thoughts!!
I can see your brilliant persuasiveness of written skills through to read your posts....,
Honestly, Your Philosophy of Ideas are amazing!!
It's worth it to spent the times to visit here.
သူက ရောက်နှင့်နေပေါ့ ... :P
ဘ၀ ကို ခံစား ဖွင့်ပြထားတာ ကိုယ်တိုင်လိုပဲ ... Good ! ဆက်လုပ်ပါဗျို့ :)
ဒီလို ဘဝမျိုးထက် ဆိုးတဲ့ ဘဝတွေ မြန်မာပြည် မှာ အများကြီး ပဲနော် မြန်မာ လက်လုပ်လက်စား မိသားစု တခုအကြောင်း လေးလဲ လုပ်ပါအုံး
ဟေ့ အနက်ရောင်ကြီး မင်းကိုယ်တိုင် ရောင်းခဲ့သလား အောက်မေ့ရတယ်ဟေ့ ကောင်းလိုက်တဲ့ အတွေးနဲ့အရေး ကြိတ်ထားဟ....ကြိုက်တယ်ဟေ့....
"နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်တွေ တစ်လက်လက်ထနေတဲ့ အကြည့်တွေကို နဲနဲလေးမှ သတိထားမိလိုက်ပုံတောင် မရပါဘူး….။ " တကယ်ထိတယ် ဒီစာသားက...တွေးခေါ်နိုင်ပုံက တကယ်ထိမိတယ်..အတွေးတွေအများကြီးပေးထားတဲ့ essay ပဲ..keep going....
အတွေးလေးက ကောင်းလိုက်တာဗျာ တကယ် ပို့ စ်ရှည်ပေမယ့် လုံးဝပျင်းမသွားဘူးး ဒါကြောင့်လည်း နာမည်ကြီးနေတာကိုးးး) အားကျတယ် အဲ့ဒီပို့ စ်က ဈေးသည် ၀ယ်မလားဆိုပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ သူ နှစ်ယောက်က အစ်ကိုတို့၂ယောက်ပဲဖြစ်မယ်...အကြည့်တစ်ချက်နဲ့ပို့ စ်ကောင်းတစ်ပုဒ်ဖန်တီးနိုင်တာ လေးစားပါတယ် ။
ဒါဆိုဖြတ်လျှောက်ပြီးမဝယ်သွားတာ နင်တို့၂ယောက်ပေါ့.. ဒါပေမဲ့ နင်ကသူ့အကြည့်ကိုသတိထားမိပြီး ခုလိုရေးတယ်ဆိုတော့မဆိုးဘူး.. နင့်ကို ပိုစ့်တစ်ခုရအောင်လုပ်ပေးတဲ့ အကြည့်ပိုင်ရှင်ဆီက နောက်တွေ့ရင်အားပေးလိုက်ပါဟာ..
မျော်လင့်ချက် ပါတဲ့မျက်လုံး တွေရဲ့အကြည့်ကို ကိုယ်ချင်းစာ တတ်တဲ့အပြင် မျော်လင့်ချက်တွေ သယ်ဆောင်ပေးလာမှာကို မျော်နေပါတယ် Ko Black yay..
ဟာ…ငါမေ့နေ လိုက်တာ အိမ်ကအငယ်ကောင်လေး ဖျားနေ လို့ ငါ့ကိုဆေးမှာလိုက်သေးတာပဲ…။ ဒုက္ခပါပဲ နွေရာသီမှိ့ မမှောင်သေးပေမဲ့ အချိန်က ၉း၀၀ နာရီထိုး တော့မယ် ဆေးဆိုင်တွေမှ ဖွင့်သေးရဲ့လားမသိဘူး..။ ဟိုရှေ့နားမှာတော့ ၂၄ နာရီဖွင့်တဲ့ ဆေးဆိုင်တစ်ခု ခါတိုင်းနေ့တွေက သတိထားမိတယ်…။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ဆိုင်မှာ လာလာဝယ်နေကြတဲ့သူတွေက သူဌေးတွေ အများသား…။ ဆေးက ဈေးများကြီးနေမလား မသိဘူး…။ ငါ့မှာပါတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ရော လောက်ပါ့မလားမသိ…။ ခက်တာပဲ ဒီရက်ပိုင်း ရောင်းလို့ကလည်း သိပ်မကောင်း…။ ဒီနေ့ဆို ပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်…။ ဒီကောင်လေး ကလည်း ဒီလိုရောင်း မကောင်းတဲ့နေ့မျိုးတွေမှ နေမကောင်း ဖြစ်ရတယ်လို့ကွာ….။
တကယ်ပဲ ညီမလေးတို့ဘ၀နဲ့ နည်းနည်းတိုက်ဆိုင်မှုရှိနေတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ။
ဒါပေမဲ့ ညီမလေးအမေက ဈေးရောင်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူး။
အဆုံးအထိသယ်သွားတာ စာဆုံးမှ သက်ပြင်းချမိတယ်
ဘလက်ကြီးပြောမှပဲ ဈေးသည်တွေနဲ့ လက်လုပ်လက်စား မိသားစုတွေရဲ့ဘ၀ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း သိတော့တယ်။ ကောင်းတယ် သယ်ရင်း။
ခင်ဗျားကတော့ ဘ၀သရုပ်ဖော်စာရေးဆရာဆိုပြီး နာမည်ကြီးဦးမှာ။ တကယ်ကောင်းတယ်ဗျ။
IT IS PICTURESQUE AND SHOW THE SURVIVAL OF "WORKING CLASS"
I WAS READING IT AGAIN & AGAIN AND FINALLY I BECOME HIM.
MOST PEOPLE WOULD HAVE FAIL TO NOTICE ANY KIND OF EYE-CONTACTS MADE IN A DAY AND CAN'T REALLY BE BOTHER TO QUESTION THEMSELF.....
I NOW REALISED - ONE SUCH LOOK MEANS A LOT TO WHOEVER CARE!!!!
REALLY APPRECIATED YOUR WORK, LOVE!
I ALWAYS KEEP AN EYE ON YOU :)
နက်ဖြန်မှာ အဲဒီလူ ဒီ့ထက်အဆင်ပြေပါစေ အနည်းဆုံး ဒီနေ့ထက်တော့ ပိုမဆိုးပါစေနဲ့ ဒါပဲပြောတတ်တယ် ဖတ်ပြီး ဘာလို့မှန်းမသိ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေလ
ဘလက်ကြီးရေ ဒီပို့ကို အရမ်းကြိုက်တယ်ကွာ ။ အကြည့်လေးတစ်ချက်ကို စာတပုဒ်ရအောင်ရေးသွားတာ မိုက်တယ်ကွာ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ သူငယ်ချင်းရေ .. :) :)
အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းတာနဲ့ ဖတ်နေလိုက်တာ ဟင်းအိုးတူးသွပါတယ်။
hm... 10x for post.